Noma yiluphi usuku oluyingozi. I-Instagram i-Anastasia Volochkova ishintshiwe isayithi le-circus, lapho izifiso ezimbi zingakhathali ngokuncintisana ngesithombe esilandelayo se-ballerina.
Sekuvele sekusobala ukuthi izindaba zakamuva ezithi uVolochkov uyashicilela ku-Instagram yakhe ukucasula okucacile. Futhi inkanyezi ye-ballet yona ayifihli ukuthi ibeka izithombe ezihlambalazayo ukuze zimcasule "izifiso ezimbi".
Kubonakala sengathi namuhla ibhola le-ballerina liye lafaka "izifiso ezimbi" nelithi "i-rancor". Ngaphezu kwalokho, baxhaswa yi-"medvy medics", okuyizingxoxo ezakha ukuxilongwa kwe-ballerina enyantisayo.
I-fresco noNicholas II yaxoshwa ababhalisile be-Instagram Anastasia Volochkova
Ngobusuku bokugcina ku-Instagram Volochkova isithombe esisha savela. Lesi sikhathi sasingekho iwele kanye neziqephu. Noma kunjalo, isithombe esisha sashaqisa abalandeli be-ex-prima Bolshoi Theatre. Esikhathini isithombe lo mculi wavalwa eceleni kwefresco entsha ehlobisa indlu yakhe yaseMoscow. Lo mdwebo ubonisa uTrans Nicholas II waseRashiya, owayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa edlule. Okulandelayo kuNicholas II kuboniswa ... yebo, Nastya Volochkova!
I-ballerina yaphawula "into entsha" ngaphakathi:
Uyazi, ngangiboshwe kakhulu yi-Ural ngamandla ayo nabantu abalungile! Ngemva kokuvakashela iThempeli ngegazi eYekaterinburg endaweni yokubulawa komndeni wasebukhosini, ngangifuna ukubeka isithombe sikaTsar Nicholas II endlini yami njengenkumbulo. Futhi manje ukhona kwenye ye-frescos yethu. Laba bantu abathandekayo abavela enkampanini "Palazzo-Fresco", lapho babeyala khona amafrescoes endlini yami yonke indlu, benza le fresco ngokushesha kakhulu. Ngino-Olya no-Nikita, sazihlanganisa ndawonye. Uthanda kanjani umphumela? Ingabe kuvumelana?
I-ballerinas yashaqeka umqondo onjalo. Emibhalweni, ababhalisile babekubheka njengokungcolisa ukuveza "abathandekayo" eduze nomfel 'ukholo. Ngokuphumelela okufanayo, ngokusho kwabasebenzisi bewebhu, uVolochkova wayala umdwebo wakhe eceleni kukaNicolai Wonderworker noma uMatronushka ... Ababhalisile abasakubaza ukuthi u-Anastasia Volochkova ugula kakhulu futhi weluleka i-ballerina ukuthi ibonisane nodokotela:
ugule ngempela ngokwengqondo. Ngicabanga ukuthi sekuyilo mkhawulo. Ukuzidweba ngcwele kugcwele ushushiso. Fu
Manje ibhola le-ballerina entsha lizibophezele emndenini wasebukhosini. Omunye uhlezi ekhanda lakhe futhi usitshela ukuthi namuhla amawele e-yacht azohlungwa ngekusasa ngemoto futhi emva kosuku uzongena emndenini wasebukhosini.
Ngizosho ukuthi kulula-i-spruce cone yehla kusukela emshubeni ibe ngaphansi kwe-xxx drag drag line yafika ebuchosheni futhi yaqala imetastasis lapho. Ucabanga emthini, futhi izitshalo azi lutho olungcwele ...
Isikhathi sokubona udokotela, ukuqhubekela phambili, kubi kakhulu. Kungasiza futhi.
UDana Borisova usekulungele ukubopha umama wakhe
UHeidi Klum ushadile
Indodakazi kaSpartak uMishulina wamemezela ukungabi namntwana kayise: ukushintshwa okusha kwendodana engekho emthethweni yomdlali
U-Anna Semenovich uphinde wadumala nge-photoshop
I-Beaver inquma ngezinwele ezimfushane
Indlela yokubala izindleko zesikhathi esizayo
Inkukhu yesitayela saseThai
Umthelela onobungozi we-chips emzimbeni
Ukuphila komuntu siqu ka-Urgant Ivan
Inkukhu ngelayisi kanye ne-cashew nuts
Umdlalo ekuthukutheliseni: isitifiketi somshumbane wesifazane - umkhuba omusha wesimo
UKonstantin Meladze akavumeli uVera Brezhnev aye ku-Eurovision